MADAXWEYNE DENI OO CABDIRISAAQ CALI SACIID U MAGACAABEY GUDDOOMIYAHA GOBOLKA BARI – Radio Daljir
Janaayo 13, 2022 5:32 g 0
Garoowe: 13 January 2022: Madaxweynaha Dowladda Puntlnd Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa soo saaray Xeer Madaxweyne Lr. 001 ee 13-ka January 2022, kuna saabsan magacaabid Guddoomiyaha Gobolka Bari.
Markuu la tashaday : Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland.
Markuu arkay: Aqoontiisa, kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa shaqo.
1. Waxaa Cabdirisaaq Cali Siciid loo magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Bari
*Xeerkani wuxuu dhaqan gelayaa markuu Madaxweynuhu saxiixo, wuuna saxiixay.
DHALANYARO SHEEGEY IN SHAQOOYINKOODII SAMEYN KUYEELATEY COLAADII BOOSAASO